Tsy nanaiky ny ramatahora ny mpitandro filaminana : olona 6 nitrandraka vatosoa tanaty faritra arovana, naiditra am-ponja | NewsMada
Tsy nanaiky ny ramatahora ny mpitandro filaminana : olona 6 nitrandraka vatosoa tanaty faritra arovana, naiditra am-ponja
Miandry ny fitsarana azy ireo amin’ny 16 febroary 2017 ho avy izao, ny olona enina voatazona vonjimaika any am-ponja, tratra ambodiomby nitrandraka vatosoa tany Maromizaha-Andasibe, faritra arovana, voalaza fa mpiasan’ny rahalahin’ny olona mpitondra ambony eto amin’ny firenena.
Tratran’ny zandary ambodiomby ny olona enina, nitrandraka an-tsokosoko vatosoa tormalina tao anaty ala, any Maromizaha, ao anatin’ny faritra arovana amin’ny Tandavanala Ankeniheny-Zahamena (CAZ), ny volana novambra teo. Nandritra ny fanadihadiana azy ireo, voalaza fa nisy ny tsindry natao ny mpanao fanadihadiana milaza fa rahalahin’ny mpitondra no naniraka azy ireo ary nitaky ny hamotsorana azy ireo. Tsy nanaiky izany ny mpitandro filaminana any Moramanga, ka naiditra am-ponja vonjimaika ireto olona enina ireto. Amin’ny 16 febroary 2017 ny fotoam-pitsarana.
Mandritra izany, nahazo fandrahonana ny mpisafo ala ao anatin’ny faritra arovana Maromizaha-Andasibe. Manara-maso ny fandikan-dalàna sy ny fiarovana ity faritra arovana ity izy ireo, saingy tsy ampy ny fiarovana amin’ny endrika tsindry sy ramatahora toy izao. Misy anefa ny vondrona iraisam-pirenena manohana ny fikambanana eto an-toerana amin’ny fiarovana sy ny fitantanana ny faritra arovana, toy ny any Maromizaha-Andasibe.
Tsiahivina fa anisan’ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fametrahana ny Fitsarana ambony manokana ho an’ny mpitondra (Haute cour de justice), tsy mbola nijoro hatramin’izao. Eo koa ny ady amin’ny kolikoly sy ny tsimatimanota, ny fandripahana ny harena voajanahary. Hatreto, tsy misy ny vokatra azo tsapain-tanana, ary izao mitohy izao ny kitranoantrano sy ny fandripahana ny harena voajanahary.